1.- Toetra Telo Ananan’ ny Anarana :
Toetra Telo no anan’ny “Anarana” amin’ny Fiteny Hebreo:
- Toetra Tsy Zehena.
- Toetra Miànina.
- Toetra Mirafitra.
11.- Toetra Tsy Zehena:
Raha “Toetra Tsy Zehena” no isehoan’ny “Anarana” iray, dia mahaleotena tanteraka izy, ka dia tsy manana “Fameno” na oviana na oviana . Izany hoe: io toetra ahitana azy io ihany,no endrika isehoany fa tsy miova tsy akory;
12.- Toetra Miànina:
Raha toetra “Miànina” kosa no isehoan’ny “Anarana” iray, dia miaradia aminy avy hatrany ao aoriany ny “Tsindrim-peo Mpampisara-teny” izay izay mifandraika indrindra amin’ny “Teboka amam-paingo”, na ny “Teboka Mamaran-teny”.
Raha izany no miseho, dia mihalava avy hatrany ny “Zana-tsoratra” na “Zana-peo” iray mialoha ny farany.
Ohatra: כספ Kêsêph , dia miova ho כספ Kâsêph ,amin’ny famaranana ny “Fehezan-teny” . Izany hoe : ny « Ségôl » eo ambnin’ny כ Kaph , dia miova ho “Qâmets”.
בבך Bâb’kâ , dia miova ho לבבך Lebâbêkâ , eo amin’ny famaranana ny “Fehezan-teny”iray. Ny “Shêva” kosa eto, dia miova ho “Ségôl”.
13.- Toetra Mirafitra:
Raha “Toetra Mirafitra” kosa no isehoan’ny “Anarana” iray, dia manana “Fameno”, na misy “Fameno” miaraka aminy. Amin’izay, dia mirafitra ho Teny iray ihany ny “Anarana” sy ny “Fameno”.Ny “Anarana” amin’izay dia toy ny “Reni-soratra Roa” anampy “Tovana” iray ihany.
Marina fa amin’ny Fiteny Hebreo, dia teny roa mifanarakaraka ny “Fenoina” sy ny “Fameno”. Raha hanao Dikan-teny marina avy amin’ny Hebreo ho amin’ny Malagasy kosa isika ohatra, dia tsy maintsy miantomboka hatrany amin’ny “…-N ‘ NY...” ny “Fameno”. Ho hitantsika amin’ny ohatra samihafa asehontsika amin’ity Lesona ity izany “Kianteny” izany.
Fa izay tsy tokony hohadinoina indrina amin’ny fandalinana ny “Toetra Mirafitra”, dia ny fetezany sy fanekeny hizaka ny karazam-panovana rehetra atao aminy.
Mizaka “Fiovan-kendrika” roa samihafa ny teny iray amin’ny “Toetra Mirafitra”:
- Amin’ny Sokajy Lahy.
- Amin’ny Sokajy Vavy.
21.- Amin’ny Sokajy Lahy:
Toy izao no fiovana mety hiseho amin’ny teny “Sokajy Lahy”:
Raha maka teny iray mahakasika ity dinihintsika ity isika, dia:
- Mihintsana ny Zana-tsoratra Voalohany.
- Mihafohy kosa ny Zana-tsoratra Faharoa.
Ohatra: דבר Dâvâr na Dâbâr = Teny ( iray na tokana ).
דבר מלך Devar Mêlêk na Debar Mêlêk = Teny-an’ny Mpanjaka ( iray na
Tokana ) = Tenin’ny Mpanjaka ( iray na tokana ).
Hitantsika manomboka eto ny fiàsan’ny “Kianteny” eo amin’ny fanohizana ny “Fenoina” sy ny “Fameno” eo amin’ny “Toetra Mirafitra” dinihintsika amin’izao “Fiovan-kendrika” izao.
b)- Filàza Maro:
Arak’izao indray no miseho amin’ity “Sokajy Lahy” amin’ny “Filàza Maro” ity:
- Miova ho י - Eiy ( misy Tsêrey ambanin’ny Reni-soratra mialoha ny ‘Yodh ) misolo ny ים - Iym ( misy Hîrik eo ambanin’ny Reni-soratra mialoha ny ‘Yodh )
- Raha “Vanin-teny” roa ihany ny Teny iray, dia mihintsana ny Zana-tsoratra voalohany. Far aha toa ka “Vanin-teny” mihoatra ny roan y Teny iray, indrindra raha “Qâmets” izany Zana-tsoratra izany, dia mihafohy ny Zana-tsoratra alohan’ny farany.
Ohatra: בנים Bâniym = Zanakalhy ( maro na maromaro ).
בני מלך B’ney Mêlêk = Zanakalahy-an’ny Mpanjaka ( maro na maromaro ) = Zanakalahin’ ny Mpanjaka .
22.- Amin’ny Sokajy Vavy:
Toy izao kosa no fiovana mety hiseho amin’ny Teny “Sokajy Vavy”
- Miova ho ת Thâv ny ה Héy.
- Mihafohy ho Patah kosa ny Qâmets.
Ohatra: בינה Biynâh = Fahakingan-tsaina = Saina Mahiratra.
בנת מלך Binâth Mêlêk = Saina-Kingan’ ny Mpanjaka = Fahakingan-
Mihintsana ny Zana-tsoratra mialoha ny Famaranan-teny, raha to aka Qâmets izany Zana-tsoratra izany.
Ohatra: בנות Bânôth = Zanakavavy ( maro na maromaro ).
בנות מלך B’nôth Mêlêk = Zanakavavy-Maro-an’ny Mpanjaka = Zanakavavin’ ny Mpanjaka.
NY ANARANA MAMPIASA SÊGÔL
Na tokony hiditra amin’ny Lohateny hafa aza isika amin’ny Lesona manaraka, dia tsy azontsika dinganina velively ny fandinihana ny « Anarana » mampiasa Sêgôl. Toy izay nandinihantsika
ny Lesona Fahavalo teo aloha, dia ny Rafitra hitantsika tamin’izay, no harahintsika amin’izao Lesona izao.
Fandinihana ny « Anarana » mampiasa Sêgôl no idirantsika, dia rariny raha halalinina ireo Teny samihafa mampiasa izany Sêgôl izany, araka ny Sokajiny avy, na Lahy na Vavy, na Samirery izy na Filàza Maro.
1.- Ny Teny Sokajy Lahy Mampiasa Sêgôl:
Toy izao manaraka izao no fisehon’ny fiovana amin’ny Teny “Sokajy Lahy” mampiasa “Sêgôl”:
Tsy iharan’ny fiovana velively ny Teny “Sokajy Lahy” izay mampiasa Sêgôl” rehefa Samirery izy. Raha toa kosa anefa ka mihintsana ny “Zana-tsoratra Voalohany”, no sady “Furtive” ny “Zana-
Tsopratra Faharoa”, dia mety tsy maharitra ilay “Teny”, na mety tsy misy mihitsy aza. Kanefa tsy izany tsy akory no miseho eto , dia mazava amintsika fa “Tsy miova na oviana na oviana io Teny io”.
Ohatra: ילד iYêlêd = Zaza na Zanakalahy na Zazakely ( iray ).
ילד מלך iYêlêd Mêlêk = Zaza-an’ny-Mpanjaka = Zanakalahin’ny Mpanjaka = Zazakely-an’ny Mpanjaka = Zanaky ny Mpanjaka ( iray na tokana ).
Tsipihina tsara eto amin’ny Filàza-Maro kosa ireto fitsipika ireto:
- Mizaka ny fiovana toy izay miseho amin’ny teny tsotra ihany izy amin’ny “Filàza-Maro”.
- Miverina amin’ny toerany nisy azy teo aloha ihany ny “Zana-tsoratra” efa azy fahiny.
Ohatra: ילדים iYêladiym = Zaza = Zazakely = Zanakalahy ( maro )
ילדי מלך iYal’deiy Mêlêk = Zaza na Zazakely-maro-an’ny-Mpanjaka = Zanakaly-Maro-an’ny-Mpanjak = Zanakalahin ‘ ny Mpanjaka ( maro na maromaro )
Tsara homarihina , fa ny ילדי iYal’deiy eto, no nampiasaina, fa tsy ny ילדי iYel’deiy.
2.- Ny Teny Sokajy Vavy Sêgôl Fiaviana :
Toy izao kosa ny fisèhon’ny fiovana amin’ny “Teny Sêgôl Fiaviana”, Sokajy Vavy:
Amin’ny “Samirery”, dia ireto avy ny lamina tsy maintsy arahina:
- Amin’ny “Toetra Mirafitra”, dia mizaka ny fiovana, toy izay fahita amin’ireo Teny “Sokajy Vavy” rehetra izy.
- Ary raha “Furtive” ( mahery toy ny mandrehoka ) ny Zana-tsoratra Faharoa; dia tsy maintsy averina hirafitra eo amin’ny Reni-soratra Voalohany ilay Zana-tsoratra nihintsana
- Taminy teo aloha.
Ohatra: צדקה Ts’dâqâh = Fahamarinana ( tokana = izay ihany = tsy azo kianina ).
צדקת מלך Tsid’qath Mêlêk = Fahamarinana-an’ny-Mpanjak = Hatsarampon’ ny Mpanjaka = An’ny Mpanjaka irery ihany ny Fahamarinana sy hatsaram-po. = Hatsaram-panahy-an’ny-Mpanjaka.
Ilay צדקת Tsed’qath no nosoloin’ io צדקת Tsid’qath miasa amin’ny Ohatra eo aloha eo io.
Toy izao manaraka izao indray ny momba ny “Filàza-Maro” amin’ny Sokajy Vavy:
- Toy ireo Teny “Sokajy Vavy” amin’ny Filàza-Maro rehetra, dia tsy maintsy mihintsana ny “Qâmets”.
- Ankoatr’izany, raha toa ka “Shêva” roa no Zana-tsoratra mifanarakaraka amin’ny Teny iray, dia tsy maintsy averina amin’ny toerany teo aloha ny Zana-tsoratra nihintsana noho ny antony manokana
Ohatra: מלקות M’lâqôth = Mpanjakavavy ( maro )
ארץ מלכות Mal’kôth ‘Êrêts = Mpanjakavavy-Marobe-an’ny-Firenena = Ny מלכות M’lecôth no nosoloin’ny מלכות Mal’kôth eto amin’ny lesontsika.
3.- Ny Teny Tsy Manara-drafitra mapiasa Sêgôl:
Zava-droa loha ihany no hojerentsika eto, satria amin’ny Lesona any aoriana, dia mbola hohalalinintsika izy ireo. Fanmpin’ izany, dia tsy hasiana ohatra aloha, fa handalovana fotsiny ihany.
- Tsy iharan’ny fiovana velively ireo Teny rehetra tsy manara-drafitra izay mampiasa “Sêgôl”, raha toa ka “Filàza Samirery” izy.
- Ny fiovana roa sosona, izay mbola hohitantsika amin’ny Lesona any aoriana, momba ny
“Fiovan-kendriky ny Fara-soratra”, dia tsy maintsy hampiharina eto amin’ity “Filàza-Maro” ity.
4.- Ny Sokajin-Teny Tsy Manara-drafitra:
Ny Teny hafa “Tsy Manara-drafitra” toy ny אב ‘Ab na ‘Av = Ray = Ikaky ( iray ) sy ny אח ‘Arh na ‘Ach = Rahalahy = Anadahy, dia toy izao ny Firafetany :
- Ny Reni-soratra ו Wav na Vav, tokony ho Famaranan-teny amin’ny אב ‘Ab na ‘Av nihintsana taminy, dia miverina indray amin’ny endriky ny י iYôdh.
- Mihintsana ny « Qâmets » isan’ny Zana-tsoratra fototra.
- Miova ho « Shêva-Patah » = Zana-tsoratra Fohifohy kokoa ho solon’izay nihintsana teo.
Ohatra : אב ‘Ab na ‘Av = Ray = Ikaky ( iray na tokana ).
אבי מלך ‘Abiy na ‘Aviy Mêlêk = Ikaky-an’ny-Mpanjaka = Ray-an’ny - Mpanajaka = Rain’ny Mpanjaka.
5.- Ny Teny Manana Reni-soratra Verindroa :
Filazalazana tsotra ihany no hazavaintsika eto:
- Ireo Teny rehetra manana “Reni-soratra Verindroa” eo am-pamaranan-teny, dia tsy iharan’ny fiovana velively, indrindra raha “Filàza Samirery” izy.
- Ny fisehon’ny fiovana amin’ity Sokajy ity, dia mitovy tanteraka amin’ny fiovana hita amin’ireo Teny “Sokajy Lahy” momba ny “Filàza-Maro” izay hohalalinina aoriana.
NY FIOVAN-KENDRIKA AMIN’ NY FARA-SORATRA
Fiovàn-kendrika amin’ny “Fara-Soratra VALO no hodinihintsika manomboka eto, dia ny :
- Fiovàn-kendriky ny Fara-Soratra.
- Fiovàn-kendrika amin’ny Sokajy Lahy sy Sokajy Vavy Samirery.
- Fiovàn-kendrika amin’ny Sokajy Lahy sy Sokajy Vavy Filàza-Maro.
- Fiovàn-kendrika amin’ny Teny Mampiasa Sêgôl.
- Fiovàn-kendrika amin’ny Sokajy Vavy Sêgôl Fiaviana.
- Fiovàn-kendrika amin’ny Soklajy Lahy Tsy Manara-drafitra Mampiasa Sêgôl.
- Fiovàn-kendrika amin’ny Vavy Fiaviana Manana Reni-soratra An-tenda.
- Fiovàn-kendrika amin’ny Teny Tsy Manara-drafitra.
Amin’ny Fiteny Hebreo, dia tsy misy “Mpamaritra Mpisolo-tena” na “Mpamaritra Tompon-javatra” mahaleo-tena.
Ho solon’izany, dia voatery manampy “Mpisolo”, na “Mpamaritra Mpisolo-tena”:
- Amin’ny endriny “Mahasori-tena” AHO.
- Na amin’ny endriny “Tsy Voasoritra Tampisaka-Feno” KO.
- Na amin’ny endriny “Tsy Voasoritra Manokana” AHY., amin’ireo “Anarana” miseho amin’ny endrika “Tovana”. Ka amin’izay dia manjary “Fameno” amin’ny “Anarana” izy.
Ohatra: דוד Dôd = Anadahin-dreny = Rahalahin-dray.
דוד י Dôd-iy = Anadahin-dreny-an-ahy = Rahalahin-dray-an-akà = Anadahin-dreniko = Rahalahin-draiko ( iray na tokana ).
Ny fampiankinana ireo “Mpisolo-Tena” amin’ny endrika “Tovana” no sady “Fameno” amin’ ny “Anarana”, no antsoina ho “Fiovàn-kendriiky ny Fara-Soratra” amin’ny Hebreo.
Na inona na inona karazana “Anarana” miseho, na amin’ny endrika “Filàza Samirery” na
“Filàza-Maro”, dia “Tovana Mpisolo” tokana ihany no hita amin’ny rehetra.
דוד ו Dôd-ô = Anadahin-dreny-an-azy = Rahalahin-dray-an-azy = Anadahin-dreniny = Rahalahin-drainy ( iray na tokana )
Matoa tsara rafitra ny dikan-teny amin’ny fandalinana ny “Fiovàan-kendriky ny Fara-soratra” Iray, dia noho ny fanomezana valin-teny tsy misy olakolaka ny fanontaniana hoe “ AN ‘ IZA IO….IO ? “, amin’ny hoe “ AN---AHY na AN---AKA “ , fa tsy hoe “ AHY” na “—KO “
Zavatra vitsivitsy ary no tokony homarihina mba hahazoantsika mamaly ny fanontaniana toy ireny sy ny valiny tokony holazaina, dia izao:
- Na “Filàza Samirery”, na “Filàza-Maro” ny “Anarana”, dia tsy maintsy ho Reni-soratra Iombonana hatrany ireo “Tovana Mpisolo” :
Ohatra: דודם Dôdâm = Anadahin-dreny-an-azy-ireo = Anadahin-drenin’izy ireo, dia avy amin’ny Teny feno hoe דודהם Dôd’hêm , fa saingy teto noho ny fisian’ny Zana-tsoratra
« Shêva » eo aloha, dia nihintsana avy hatrany ny ה Heiy , ka dia io hitantsika eo aloha io ny דודם Dôdâm.
Na dia Reni-soratra iombonana aza anefa ny « Tovana Mpisolo », dia misy ihany fahasamihafany izay tsy dia lehibe loatra, hita eo amin’ny « Filàza-Maro », noho ny « Tovana Mpisolo » tsy maintsy ialohavan’ny י iYôdh hatrany.
Eo amin’ny « Fiovan-kendriky ny Fara-soratra », ireo « Anarana » amin’ny Sokajy “Vavy
Filàza-Maro », dia manana famantarana roa anavahana azy tsara :
- Famantarana ny Sokajy « Vavy Filàza-Maro », dia ny ות ---Ôth.
- Famantarana ny Sokajy “Lahy Filàza-Maro”, dia ny י iYôdh.
Manomboka amin’ireo “Mpisolo Anarana Faharoa” amin’ny “Filàza-Maro”, dia tsy maintsy
Manana Reni-soratra hatrany ny “Tovana Mpisolo”.
Mba ho fanantitranterana ireo fanazavana nataontsika teo aloha ireo, dia misy zava-droa loha asehontsika eto:
i)- Rehefa arafitra amin’ny Teny iray ny “Tovana Mpisolo”, dia:
- Manjary miova toerana any amin’ny faran’ny “Fanehoana Anarana” izay iharan’ny fanovàna ny “Tsindrim-peo” sy ny “Ngadona” fanatsarana ny “Lantom-peo”.
- Tsy mihatra amin’ny דוד Dôd anefa ny fanovana , noho io Teny io sady tsy manana afa-tsy Zana-tsoratra tokana ihany, no sady Zana-tsoratra tsy mety miova velively koa no miaraka aminy.
ii)- Amin’ny ankapobeny
- Raha ampiana Tovan’nyReni-soratra iray ny “Anarana”, dia Fiovan-kendrika iray ihany no tsy maintsy zakainy.
- Raha ampiana ny Tovan’ny Reni-soratra roa kosa ny “Anarana”, dia fiovan-kendrika roa no tsy maintsy zakainy.
NY FIOVAN-KENDRIKA AMIN’NY SOKAJY LAHY SY SOKAJY VAVY SAMIRERY
1.- Sokajy Lahy Filàza Samirery :
11.- Fanazavana Mialoha :
Amin’ny « Sokajy Lahy » « Filàza Samirery » rehetra, dia toy izao no mety ho fisehon’ny fiovàna :
- Fiendahan’ny Zana-tsoratra Voalohany amin’ny Teny iray ( raha tsy ohatra angaha ka Zana-tsoratra tsy mety miova izy ).
- Fihafohezan’ny Zana-tsoratra Faharoa ( raha tsy ohatra angaha ka Zana-tsoratra tsy mety miova izy ).
Ohatra: דבר Dâbâr = Dâvâr = Teny ( tokana ).
דברך D’bâr’kâ = D’vâr’kâ = Teny-anao = Teninao.
דברכם D’bar’kêm = D’var’kêm = Teny-anareo = Teninareo.
Naiditra amin’ireo Teny ireo ny « Shêva », satria na eo am-piandohana na eo anivon-teny iray ny Reni-soratra, dia tsy maintsy manana Zana-tsoratra miara-dia aminy hatrany izy
12.- Tsiahy :
Indreto misy Tsiahy Telo tokony horaketina an-tsaina tsara :
i)- Ny Sokajy Lahy Filàza Samirery, izay sady manana Zana-tsoratra Lava ( raha izy no voalohany ), no manana koa Zana-tsoratra tsy mety miova ( eo amin’ny faharoa ) , dia tsy iharan’ny Fiovana nohazavaintsika teo aloha momba ny Fiendahan’ny Zana-tsoratra voalohany, amin’ny fotoana anampiana “Tovana” eo amin’ny Reni-soratra iray.
Ohatra: שכיר Sâkiyr ( eo amin’ny rantsana havia ny teboka ) = Mpanao Sarak Antsaha
= Mpitady vola isan’andro = Mpikarama isan’andro.
שכירך S’kiyr’kâ = Mpanao-Sarak’Antsaha-Anao = Mpanao Sarak’antsahanao = Mpiasanao manao sarak’antsaha.
שכירכם S’kiyr’kêm = Mpanao-Sarak’Antsaha-Anareo = Mpanao Sarak’Antsahanareo = Mpiasanareo Manao Sarak’Antsaha.
ii)- Raha misy Teny iray , ka Zana-tsoratra tsy mety miova ny Voalohany, fa lava kosa ny Faharoa, di any Faharoa ihany no iharan’ny fiovana. Izany hoe: Fihafohezan’ny Zana-tsoratra Faharoa izy amin’izay, amin’ny fotoana anampiana “Tovana” amin’ny Reni-soratra roa.
Ohatra: חותם Rhôthâm = Fitomboka ( iray ).
חותמך Rhôtham’kâ = Fitomboka-Anao = Fitombokanao = Fitombokao.
חותמכם Rhôtham’kêm = Fitomboka-anareo = Fitombokanareo.
iii)- Samy tsy iharan’ny fiovana na oviana na oviana kosa ny Sokajy « Lahy Filàza Samirery » izay manana :
- Zana-tsoratra sady tokana ni tsy mety miova, toy ny סוס Sous = Soavaly.
- Shêva iray sy Zana-tsoratra tsy mety miova, toy ny חמור Rhamôr = Ampondra.
- Zana-tsoratra roa tsy mety miova, toy ny תיכון Thiykôn = Anaty = Anivo = Ivon-toerana = Ati-trano.
Amin’ity farany ity, ohatra, dia tsy iharan’ny fiovana velively.
2.- Sokajy Vavy Filàza Samirery:
21.- Fanazavana Mialoha:
Amin’ny Sokajy “Vavy Filàza Samirery” rehetra, dia toy izao avy ny fisehon’ny fiovana:
- Fiovan-kendriky ny ה Hêiy , hanjary ת Thâv.
- Fihafohezan’ny “Qâmets” , hanjary “Patah”.
Ohatra: דודה Dôdâh = Anabavin-dray = Rahavavin-dreny.
דודתך Dôdâth’kâ = Anabavin-dray-Anao = Rahavavin-dreny-Anao = Nenitoanao. דודתכם Dôdath’kêm = Anabavin-dray-Anareo = Rahavavin-dreny- Anareo = Nenitoanareo.
22.- Tsiahy :
Ny Teny rehetra amin’ny Sokajy « Vavy Filàza Samirery », izay miafara amin’ny ית iYth ,
na ny ות Ôth , dia tsy iharan’ny fiovana velively.